नेकपा स्थायी कमिटी बैठक आज, के गर्लान् ओली ? | जनदिशा
नेकपा स्थायी कमिटी बैठक आज, के गर्लान् ओली ?
काठमाडौँ। सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी बैठक आज बस्दैछ। गत मंसीरमा २१ गते सुरु भएको बैठक १० दिनका लागि स्थगनपछि आज दिउसो १ बजे पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बस्न लागेको हो ।
मंसीर २१ को बैठकमा उपस्थित नभएका प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आजको बैठकमा सहभागी हुने या नहुने निश्चित छैन । पार्टीभित्र अल्पमतमा परेका उनी स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। उनले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेस गरेको प्रस्तावमाथि छलफल हुन नसक्ने भन्दै पत्र पठाएका थिए।
सहमति खोज्न औपचारिक छलफल आवश्यक भएको भन्दै १० दिनका लागि स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित गरिएपनि यसबीचमा कुनै सहमति भने भएको छैन। यद्यपि नेताहरुको दौडधुप भने चलिरहेको छ। कमिटीबाट हुने निर्णय आफू अनुकूल नहुने बुझेका प्रधानमन्त्री ओली यसअघि नेताहरुलाई तर्साउने र गलाउने रणनीतिमा थिए। तर उनको त्यो रणनीति सफल नभएपछि अहिले फकाउने रणनीतिमा छन्।
पार्टीका सबै कमिटीमा अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री ओली अहिले कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई फकाउने प्रयासमा छन् । यसअघि बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल,बामदेव गौतम लगायतका नेतालाई फकाउन गरेको प्रयास असफल भएपछि ओली प्रचण्डलाई मनाउने प्रयासमा लागेका हुन्। बिहीबार प्रचण्डसंग करिव डेढ घण्टा भएको छलफलमा कुनै ठोस सहमति नभएपछि उनले निकटस्थहरूलाई उपयोग गर्दै प्रचण्डल़ाई सहमतिमा ल्याउने कोसिस जारी राखेका छन् । तर पनि सफल हुन सकिरहेका छैनन् ।
शनिबार मात्रै ओलीनिकट नेता एवं स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलले अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेका छन् । सो भेटमा के कुराकानी भयो केही खुलाइएको छैन ।
नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले भने आजको बैठकमा ओली सहभागी हुने बताएका छन् ।
नेकपाको ४४ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा ओलीका पक्षमा प्रष्ट खुलेका सदय ११ जनामात्र छन् । त्यहाँ पनि विधि र पद्धति मिचेको भन्दै ओलीलाई प्रतिकूल हुने निर्णयले निरन्तरता पाउने सम्भावना छ । दुई अध्यक्षबीच छलफलका एजेण्डामा सहमति गरेर मात्र बैठक बोलाउनुपर्ने ओलीको अडान रहँदै आएको छ। त्यसैले सहमति नहुँदा आजको बैठकमा पनि ओली सहभागी हुने सम्भावना न्यून रहेको उनीनिकट एक नेताले जानकारी दिए ।
Previous Previous post: ट्रम्पको मुद्धा सर्वोच्चद्धारा खारेज
Next Next post: एचआइभी सङ्क्रमित ७९९ जना एआरटी सेवन गर्दै